दुईबर्षे कार्यकाल पूर्वाधार उन्मुख::Online News Portal from State No. 4
बागलुङका चारवटा नगरपालिका मध्ये पूर्वाधार बिनानै बनेको नगरपालिका हो जैमिनी नगरपालिका । जहाँ एक किलोमिटर सम्म पनि पक्कि सडक छैन । नगरकै भवन बनाउनका लागि सार्वजनिक जग्गाको अभाव छ । संघिय संरचना अनुसार साविक कुश्मिसेर, दमेक, राङखानी, पैयुथन्थाप, सर्कुवा, विनामारे, जैदी, छिस्ती र अर्जवा गरी ९ वडा गाविसलाई समेटेर १० वटा वडा बनाइएपछि जैमिनी नगरपालिका बनेको छ । नगरपालिको समृद्धिको लागि विभिन्न विकासको योजना बनाईएका छन् । केही कामहरु अगाडि बढेका छन् । सबै वडामा सडकको सञ्जाल समेत नरहेको अवस्थामा बनेको यो नगरपालिकाले पहिलो प्राथमीकतामा सडकलाईनै राखेर दुईबर्ष काम गरीसकेको छ । दुईबर्ष पहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताको मत पाएर निर्वाचित भएका नगर प्रमुख लगायतका जनप्रतिनिधिले के गरे र के गर्दै छन् ? जैमिनीको समग्र विकास र आगामी योजनाका बिषयमा हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं । प्रस्तुत छ सहकर्मी योगेशजंग खड्काले नगरप्रमुख इन्द्रराज पौडेल सँग गरेको कुराकानी ।
हामीले दुई बर्षको अबधिमा धेरै काम गरेका छौं । विकासका सबै क्षेत्रमा केही न केही परिवर्तन भएका छन् । प्रमुख काम जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्रलाई जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने सडको स्तरउन्नती शुरु भएको छ । यो सडकको स्तरउन्नतीकोलागि हामीले धेरै प्रयास गयौं । अहिले काम चलिरहेको छ । अब हाम्रो नगरमा थोरै भए पनि पक्की सडक बनाईनेछ । केही समय पहिले जीर्ण अवस्थामा रहेको सडक केही परिवर्तन र सुधार भएको देख्न सकिन्छ । पहिलेको सडक हामी आएपछि नगरका विभिन्न वडामा रहेका सडकमा धेरै अन्तर छुट्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले । नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा पुग्ने सडकको सुधार देखि लिएर, पक्की नाली बनाउने काम भैरहेका छन् । कतिपय सडकमा अस्थायी नालीको व्यवस्था गरेर बर्षातको भल कटाउने काम भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी क्षेत्रमा समेत कयौं कामहरु भएका छन् । जुन कुरा मैले भन्नुभन्दा यहाँका जनताले भन्नुभयो भने अझै प्रष्ट हुनुहुन्छ ।
हजुरहरुका कामबाट सर्वधारण त निराश जस्तो देखिन्छन नि ?
काम गर्दै जाँदा सवैको चित्त त कहाँ बुझाउन सकिन्छ र ? तर पनि अहिले सम्म नगरपालिको काम देखेर निराश भएको भने कोही पनि देखेको छैन । नगरवासीले अहिले विकासको अनुभव गरेका छन्, त्यसैले नगरपालिको काम बाट कोही निरास भए जस्तो मलाई लाग्दैन ।
विना पूर्वाधारको नगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माण प्राथमीकता भन्नु भएको थियो । कहाँ कहाँ बने पूर्वाधार ?
हो मैले भनेकै थिएँ । हामिले पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिन्छौं । भने अनुरुपनै नगरमा पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढिसकेको छ । जैमिनीको सेरा बजारमा ४ सय मिटर सडक पिचको काम नगरकै सकृयतामा चलेको छ । सझेदारीमा अरु थप सडक पक्कि हुँदैछन् । विद्यालयहरुमा कक्षाकोठाको व्यवस्थापनको लागि योजनाहरु अघि बढिरहेका छन् । अहिले नगरप्रमुख भएको २ वर्षको अन्तरालमा हुन सक्ने पूर्वाधार निर्माणको काम भै रहेका छन् र अझै ३ वर्ष कार्यकालम सम्ममा जैमिनीमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको योजना बनाई योजना सम्पन्न गर्न तर्फ विशेष ध्यान पु¥याईएको छ ।
शिक्षामा सुधार हुन सकेन, सामुदायीक विद्यालयमा विद्यार्थीनै छैनन् भन्छन । कहिले सुधार्नु हुन्छ ?
हो यो समस्या हाम्रो नगरमा मात्र नभएर नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको समस्या हो । बसाईसराई हाम्रो नगरको प्रमुख समस्या हो । बसाईसराईको कारण गाउँ टोलमा नै मानिस नहुने समस्या छ । विद्यायको गुणस्तर सुधारको लागि विभिन्न योजनाहरुमा काम भईरहेको छ । विद्यालयको गुणस्तर सुधारको लागि प्रमुख विद्यालयमा योग्य जनशक्ति खटाउने कामको थलानी गरीएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक आवश्यकता हुँदा शिक्षकहरुले नजिकको व्यक्ति वा आफन्त समेत राख्ने गरेका पाईएकाले यसको सुधार थालिएको छ । योग्यता नपुगेको शिक्षक नियुक्त गर्दा भोली बालबालिका लाई घाटा हुन्छ । यस कारणले शिक्षाको स्तर घट्ने समेत हुन्छ । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि विद्यालयहरुमा दक्ष जनशक्ति मात्र राख्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु विद्यालय व्यस्थापन समितिका पधादिकारी र विद्यालयका प्रधानाध्यायापकहरुलाई दिँदै आइरहेको छौं । यसैगरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि कक्षा ८ परीक्षा नगरपालिकाले लिने तय गरेका छौं । विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर, व्यवस्थापन र बिद्यार्थाीको सिकाईलाई मध्यनजर गरेर नगरका विभिन्न विद्यालयलाई पुरस्कृत गर्दै आईरहेका छौं । जसमा अहिले नगरका ६ विद्यालयलाई पुरस्कृत ग¥र्यौ । यसैगरी नगरका विद्यालयको परीक्षाको प्रतिफल हेरेर धेरै विद्यार्थीहरु गणित विषयमा कमजोर भएको मुल्याङन ग¥र्यौ । यसको सुधारको लागि शिक्षकहरुलाई गणित विषयको तालिम समेत संचालन गरेका छौ ।
निर्णय प्रकृया ढिलो भएर कतिपय बन्नु पर्ने समितिहरु नबनेको कुरा छनी । सार्वजनिक लेखा समिति किन नबनाउनु भएको ?
अहिले नबनेको समिती मध्य लेखा समिति र विधान समिती हो । यी दुई समिती नबन्नुको प्रमुख कारण भनेको राजनितिक शक्तिको कारण हो । पहिले यहि कारणले गर्दा केहि कुरामा सहमति हुन नसक्दा समिती बनाउन ढिलो भएको हो । अव भने छिट्टै नै समिती बनाउने तर्फ ध्यान दिने छौं । न्यायिक समितिले भने अहिले पुर्णता पाईसक्यो । न्यायीक समितिले पूर्णता पाउन केही समय लागे पनि अहिले समिति पुर्ण भएको छ ।
अवको बर्षको बजेट कस्तो बन्छ । करैमात्रै उठाउने कि काम पनि गर्नेखालको ?
अवको बजेट सवैखालको काम गर्न खालको बन्छ । जनताले तिरेको कर जनताकै हितको लागि प्रयोग गरेका छौं । बजेट निर्माण कस्तो बनाउने भन्ने सवलमा भने छलफल अझै जारी छ ।
माटो भत्काउँदा वातावरणीय प्ररिक्षण गरेर वातावरण जोगाउने गरी काम कहिले थाल्नुहुन्छ ?
वातावरण संरक्षणको काम सुरु भै सकेको छ । सडक सञ्जाल गाँउ–टोलमा पु¥याने क्रममा खनिने सडकले गर्दा दैविक प्रकोप निम्त्याउने गर्दछ । त्यसैले प्रकोप बाट बच्नकोलागि सडकको निर्माण गरी सके पछि वृक्षरोपणको कामलाई अगाडि बढाएका छौं । सडकको विकासको लागि यस आर्थिक वर्ष देखि दिगो सडक विकास नामक योजना लागु भएको छ । जस कार्यक्रम अन्र्तगत जैमिनी नगरका १० वडाका मुख्य सडकलाई परेको बजेट मध्य ८० प्रतिशत रकम सडकको स्तरउन्नतीको लागि खर्च गरीन्छ भने २० प्रतिशत रकम नयाँ सडक बनाउन खर्चने भन्ने छ । उक्त योजना लागु गर्न मुख्य उद्देश्य भनेकै सडकलाई दिगो बनाउने हो ।
जैमिनी बासी सबैले सहज हिसावले खानेपानी पाउने दिन कहिले आउला ?
नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा खानेपानीको समस्या देखिएको छ । ४ र ५ वडामा लिफ्टीङ प्रणलीबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न लागिएको छ । यसै गरी नेवा र नगरपालिकाको साझेदारीमा नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा खानेपानी सहज तरिकाले पु¥याउन काम गरीरहेका छौं । त्यसैले अवको छिट्टै जैमिनी बासीलाई खानेपानीको समस्या बाट मुक्त गर्ने योजना रहेको छ ।
सबै भन्दा पहिले त म तपाई र तपाईको पत्रिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस जैमिनी नगरपालिकामा भए गरेका विषय र आउने वर्षका कार्यक्रमहरुमा आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा । सवै जनप्रतिनिधि साथिहरु लाई आफ्नो क्षेत्रको समृद्धिको लागि निष्पक्ष तरिकाले काम गर्न समेत यस पत्रिका मार्फत आवहन गर्दछु । साथै नगरको समृद्धिको लागि नगरका सवै आम नागरिकसँग सहकार्य गर्दैै आघि बढ्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।